सोसल मिडियालाइ खुर्पाको बिँड बनाउने कि श्रीखण्डको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामै भरपर्छ-निलाम्बर शर्मा - MeroReport
सोसल मिडियालाइ खुर्पाको बिँड बनाउने कि श्रीखण्डको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामै भरपर्छ-निलाम्बर शर्मा
प्रविधि तपाईको रुची मात्र कि पेशा?
यो मेरो रुचि अनि पेशा दुवै हो । पढाइले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर भए पनि सफ्टवेरतिर लागियो आफुलाई निकै मन पर्ने भएर ।
प्रविधिका बारेमा लेखिएका ब्लगका पाठकहरु को हुन नेपालमा?
प्राविधिक विषय पढ्ने बिद्यार्थीहरुले यस्ता ब्लगहरु धेरै हेर्छन जस्तो लाग्छ । अरु पेशामा लागेकाहरुले पनि हेर्ने गरेको पाएको छु । आ-आफ्नो रुचीको कुरो न हो !
आफ्नो पेशासंग जोडिएका सवाललाइ ब्लग मार्फत उठाउँदाको फाइदा चाँही के नि?
सजिलो माध्यम भएकोले आफ्नो पेशा सम्बन्धि थुप्रै पोष्टहरु गर्ने गरेको छु । अरुलाइ पनि थाहा होस् न आफु ले के भोगिरहेको छु, कस्तो छ अवस्था भन्नेकुरा । यहि त हो ब्लगिङ्गको सुन्दरता !
सोसल नेटवर्किङ साइटमा हुने कस्ता कुराले तपाईलाइ तान्नेगर्छ, खासगरी ट्विटर फेसबुकमा हुने बहसका बारेमा भन्नुपर्दा ।
म फेसबुक भन्दा ट्वीटर नै धेरै चलाउँछु । ट्वीटरको एक सक्रिय प्रयोगकर्ता नै भन्दा पनि हुन्छ । ट्वीटर ज्वाइन गरेर धेरै राम्रा साथीहरु भेटेको छु । TFC Nepal पनि गर्व गर्न लाएको कुरा हो । स्थापना देखि नै लागियो त्यसमा । रमाइलो लाग्छ ।
अहिले नेपालमा ब्लगिङ् निकै विकास हुँदै गरेको जस्तो लाग्छ । इन्टरनेटको पहुँच बढ्नु पनि एउटा कारण हुनसक्छ । आफ्ना कुराहरु अरुमाझ पुर्याउने राम्रो माध्याम बनेको छ । कोही साहित्य सम्बन्धी छन, कोही प्रविधि सम्बन्धि । विविध विधामा ब्लगहरु भेटिन्छ ।
त्यस्तो खासै त छैन । तर TFCNepal कै मिटिङमा जाँदा मैले नचिने पनि कति साथीहरुले चिन्नुहुँदो रैछ, मलाई ट्वीटरमा फलो गरेर । रमाइलो लाग्ने के !
एउटा ब्लगरका नाताले सोसल मिडिया मार्फत आफुले कुन कुरामा योगदान गरेको छु जस्तो लाग्छ?
अरु केहि नभएपनि प्राविधिक क्षेत्रमा लागेकाहरुका लाइ चाँही उपयोगी नै छ जस्तो लाग्छ मेरो ब्लग । सफ्टवेर बनाउनेहरुलाई कोड नमिलेर टाउको ठोक्काउने काम अलि कम होला कि ! हाहाहाऽऽऽ
खासमा सोसल मिडियाको उपयोग गर्ने नै आफ्ना कुराहरु अरुमाझ पुर्याउनलाई हो तर कहिलेकाँही भर्चुअल हुनुको फाइदा उठाएर अरुलाई हानी पुर्याउने र दुरूपयोग गर्ने केशहरु देख्दा चै दु:ख लाग्छ ।
विविध क्षेत्रका मानिसहरुको विचार एकत्रित हुने ठाँउ हो सोसल मिडिया । गहन बहस र छलफलबाट विभिन्न अभियान र कार्यक्रमहरु सुरु भएका छन्, अनि सफल पनि भएका छन् । वाहियात गफ गरेर टाइम पास गर्ने सोचका साथ आउने तत्वहरुले गर्दा मात्र कहिलेकाँही नराम्रा घटनाहरु घट्ने गरेका हुन् ।
सोसल मिडिया मार्फत सामाजिक अभियानहरुमा पनि निरन्तर सहभागी भैरहनुभएको छ । यस्तो किन गर्नुभएको हो? के मिल्छ यसबाट?
सोसल मिडिया मार्फत पनि देश र समाजको लागि केहि गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भनेर लागिन्छ । आफ्नो सानो सहयोगले अरुको ओठमा मुस्कान आउँछ भने कति खुसी लाग्छ, भन्नुस त !
'टेक' सम्बन्धी पोष्ट नै बढी भिजिट हुन्छ मेरो ब्लगमा । आफ्नो वेबसाइटमा नेपाली मिति राख्न एउटा widget बनाको छु ! त्यो widget पनि थुप्रै वेबसाइटमा राखिएको छ ।
मेरो अनुभवमा 'टेक' सम्बन्धि ब्लगमा चाँही बढी How To र Best Free पोष्टहरुमा भिजिट आउछ । कुनै समस्या पर्दा कसरी समाधान गर्ने भनेर लेखेका पोष्टहरुमा राम्रो भिजिट आउछ । आफुलाई अप्ठेरो परेपछि सर्च गर्ने त हो ! :D
अरु विधाको तुलनामा अलि कम भएपनि यस्ता ब्लगहरु पनि बढ्दै गैरहेको पाएको छु । प्रविधिको विकास हुँदैगर्दा यस्ता बिषयमा लेख्ने अनि पढ्न रुची राख्ने मान्छेको संख्या पनि त बढ्ला नि !
टेक सम्बन्धि प्रख्यात ब्लगहरु त हेरिन्छ नै । पेशाले गर्दा पनि हेर्नेपर्छ, हाहा ! अरु नेपाली ब्लग पनि हेर्नेगर्छु । नेपाली लेखहरु पढ्नेगर्छु ! साहित्यमा चाँहि कथाहरु पढ्नेगर्छु ! मैले प्राय: हेर्ने ब्लग हरुमा aakarpost.com, jawknock.com , techsansar.com आदि हुन ।
खासमा सामाजिक सञ्जाल आफ्न कुरा अरुमाझ पुर्याउने साझा थलो हो । साथै सुचनाको माध्यम पनि हो, अनि मनोरञ्जन तथा विज्ञापन को पनि । त्यत्ति हो कि, सही समयमा सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
अहिलेको समयमा निकै महत्वपुर्ण छ सामाजिक संजाल । तर प्रयोग गर्ने मान्छेमा भरपर्छ उसले कसरि उपयोग गर्छ भन्ने कुरा । खुर्पाको बिँड बनाउने कि श्रीखण्डको रुपमा प्रयोग गर्ने !
म पत्रकारिताको बिषयमा अनभिज्ञ भएकोले यसबारेमा खासै थाहा भएन तर केहि फरक होला कि ! पत्रकारिता पढ्ने मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिन्छ होला तर ब्लगिङ्मा आफ्नो बिचार र अभिव्यक्ति मुख्य हुन्छ ।
ब्लगिङलाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि चाहिन्छ भन्ने बहस पनि छ एकातिर, तपाइलाइ के लाग्छ, के यो जरूरी छ?
आचारसंहिता बनाएर पालना गराउने अवस्था आउन दिनुभन्दा त आचारसंहिता नै नचाहिने गरि आफु सजग र सचेत हुनु राम्रो होला नि, हैन र? आचारसंहिता भयो भने ब्लगरलाई सतर्क र जिम्मेवार बनाउन सहयोग त गर्ला तर ब्लगर आफै संवेदनशील हुनु राम्रो ।
मेरोरिपोर्टलाइ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना !
Comment by Lava Kafle on February 22, 2013 at 4:46pm
Comment by Pagal Basti on February 20, 2013 at 4:16pm
Badhaai 6, Nilambar bro lai
Comment by JawKnockRaazaa on February 20, 2013 at 3:30pm
Congrats!! Good Interview!! :D